HETSI-BAHOAKA: Ny mpanao politika no tena mahazo ny tombontsoa - Journal Madagascar
“Tokony arahina izay lazain’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana”, hoy ny solombavambahoaka Nicolas Randrianasolo. Nambarany fa ny mpanao politika no mahazo ny 90 %-n’ny tombontsoa azo avy amin’ny fitarihana hetsi-bahoaka. Ny 10 % fotsiny no mankany any amin’ny vahoaka. Noho izany, “tsy vahaolana ny fanakorontanana fa avelao hitondra izay filoham-pirenena lany”, hoy izy. Manana dimy taona io filoham-pirenena hitondràna ny firenena ka amin’izay fotoana izay dia manana adidy ny olom-pirenena hanaraka akaiky ny asa ataony.
Harenina ny lesoka
Efa hita ny lesoka tamin’ny fifidianana filohan’ny repoblikan’i Madagasikara na tamin’ny fihodinana voalohany na faharoa. Nilaza i Nicolas Randrianasolo fa ny fanarenana izany no antoka hisian’ny fifidianana madio, mangarahara ary eken’ny rehetra. Nanamafy ny tenany fa vonona hatrany ho kandida amin’ny fifidianana solombavambahoaka ho avy eo.
Tags: hatsi-bahoakaHCCnicolas randrianasolo